Ndirikunzwa kuda murume anondiisa zviri hard asingakurumidze kutunda! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndirikunzwa kuda murume anondiisa zviri hard asingakurumidze kutunda!
Maxwell ane charm masasi aitaura naBrian apa achizama kundiisa muconversation yacho, akazonditarisa akaditi “What do you do” ndikati I am in media aaah takatanga kutoita kunge takazivana kare nekuti iye ayinge ari journalist . After some time Brian akati ndakuyenda nekuti ainge ane zvakawanda the next day saka ayida kunge ane a clear head. Max akabvunza kuti ndirikuda imwe drink her ndikati ehe then Brian waved goodbye, ndokubva ndasara naMax ainge akanaka mhani apa mhasuru dzake dzaiyita kuti beche rangu ritambe tambe kuita kunyerekedzwa.
Max akanditi handei ku dinner ndikati it’s fine ndokubva andiyendesa kune this Italian restaurant yainge iri around the corner. The food was nice, ndipo paakandibvunza kuti ndinogara kupi as he wanted kundiperekedza kumba ini ndaigoti chii nhai masasi ndainge ndakatomuteya nekuti zvaiyita beche rangu rainge ratononokerwa. Takapinda mu Uber ndokuyenda kumba tasvika ndokubva ndamuti please come in, handiite waste any time.
Previous articleNdakaramba ndichiwedzera kumuisa nerurimi apa ndichirumirira!
Next articleNdakamupidigura and grabbed magaro ake ndokupomba kusvikira ndatundira mukati!